Maps မော်ကွန်း - ထို rayhab
ဒါဟာအဇာဘိုင်ဂျန်မြို့တော်ဘာကူမြေအောက်ရထားစနစ်ကတွင်တည်ရှိသည်။ ဒါဟာနိုဝင်ဘာလ61967 ဖွင့်လှစ်။ အရှည်၏ 36,7 ကီလိုမီတာနှင့်325 ပင်ရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်ပါရှိသည်။ ဒါဟာမွတ်စလင်နိုင်ငံများက built-in ကိုပထမဦးဆုံးမြေအောက်ရထားဖြစ်ပါတယ်။ ရာစုနှစ်၏အစအဦးမှာပါ, ဒါပေမယ့်မရသာကော့ကေးဆပ်ပြည်နယ်အတွက်ဘာကူ [ပို ... ]
မီးရထားန်ဆောင်မှုအဇာဘိုင်ဂျန်ပြည်နယ်အဖွဲ့အစည်းများအားဖြင့် operated နေကြသည်။ အဆိုပါ 1991 အဇာဘိုင်ဂျန်ပြည်နယ်မီးရထားများတွင်အစားဆိုဗီယက်မီးရထား၏ကုမ္ပဏီ, (Azerbaijani အဘိဓါန်DövlətDəmနည်းလမ်းများ) ကိုအမည်ဖြင့်အောက်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည် 2009 အတွက်၎င်း၏လက်ရှိအမည်ဖြင့်ခေါ်သွားတယ်။ Center ကဘာကူတွင်တည်ရှိသည်။ အဇာဘိုင်ဂျန်အတွင်းပထမဆုံးရထားလမ်း [ပို ... ]
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရွာတွေဒါမှမဟုတ်ဘာအလယ်ပိုင်းဖြစ်ပါသည်, အဆောက်အဦ Logistic စင်တာများတွင်တည်ရှိသည်ထားတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများ၏အားသာချက်များကိုဘာတွေလုပ်နေလဲ, ဥရောပမှာရှိတဲ့အရေးကြီးဆုံးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများဘာတွေလဲ, တူရကီ၌တည်သည့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပန်းခြံရဲ့အရည်အသွေးစံနှုန်းများ, ဘာတွေလုပ်နေလဲနှင့်အဘယ်မှာရှိထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများတည်လိမ့်မည်လဲ? [ပို ... ]
တူရကီက Metro ရထားစနစ် Map နှင့် Ankaray: အတ္တရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက်ဖြစ်သောတူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်အထွေထွေညွှန်ကြားမှုတူရကီတူရကီ၏မြို့တော်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု။ အလင်းရထားလမ်း၏တူရကီတည်ဆဲမီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ရက်မက်ထရို, [ပို ... ]
ခွင့်ပြုချက် Metro နေဖြင့်တူရကီ၌ဤရောက်လာရန်မျှော်လင့်ခဲ့သည်
အဆိုပါက Metro ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုခေါ်ဆောင်သွား Izmir, Buca ၏အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစားပေးစီမံကိန်းများကို။ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer, ငါးနှစ်အတွင်း, Buca Metro သူတို့ကသမ္မတနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုအတည်ပြုချက်ဖွင့်လှစ်ရန်မျှော်လင့်ထားဟုဆိုသည်လာမည့်နှစ်တွင်ဆောက်လုပ်အလုပ်စတင် [ပို ... ]
ဤသည်က Metro မြေပုံ
Izmir သိသိသာသာ, Izmir ရဲ့ Buca Metro အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးလက်ခံရရှိမှုအတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်မှသုံးကြိမ်တရားဝင်တောင်းဆိုမှုကိုအသွားအလာသက်သာရာမျှော်လင့်ထားရန်တူရကီကနေအတည်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်။ စီမံကိန်းရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ Izmir တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer, " [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်က Metro မြေပုံ | အစ္စတန်ဘူလ်က Metro မြေပုံ
အစ္စတန်ဘူလ်က Metro မြေပုံ: အစ္စတန်ဘူလ်က Metro မြေပုံအားလုံးအသေးစိတ်အပေါ်ပြသသည်, ပိုကြီးတဲ့ဗားရှင်းမြေပုံပေါ်တွင်အစ္စတန်ဘူလ်က Metro မြေပုံ 's ကိုနှိပ်ပါ။ Maps ကိုမူရင်းများအတွက်အေဂျင်စီခေါ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ဖြစ်ကြသည်။ အစ္စတန်ဘူလ်က Metro [ပို ... ]
ဇွန်လ 23 အတွက်ရွေးကောက်ပွဲသမ္မတသန်းအပေါ်ရွေးကောက်ပွဲမှသှားသောသက်တမ်းတိုးအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM), preference ကို၏အတိုင်းအတာအတွင်းမှာဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ တရားဝင်ရလဒ်တွေကိုအပေါ်တစ်ဦးကြေညာချက်သည် CHP နှင့်အမျိုးသားမဟာမိတ်အဖွဲ့ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏အဆိုအရ SBE နိုင်ငံတော်သမ္မတ Sadi ကိုးစား Ekrem ကောင်း [ပို ... ]
Adana Metro မြေပုံ
M1 Adana Metro မြေအောက်ရထားလမ်းကြောင်း, M1 မြေအောက် (Direction အဖွဲ့: Raiders) ကိုချောင်းမြောင်းနှင့် pauses, စိတ်ကျန်းမာရေးဘူတာကနေစတင်အနေအထား 13 Raiders ဘူတာမှတက်တတ်၏။ 1: မြေအောက်ရထားလိုင်းကိုလာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းအပေါ် M06 နာရီခြုံငုံသုံးသပ်ချက် 00 အလုပ်စတင်နေပါပြီ [ပို ... ]
Halkalı Marmaray Gebze ပေါင်းစည်းရပ်ပြီးလိုင်းများမြေပုံ: နိုင်ငံသားများစိတ်အားထက်သန်စွာအစ္စတန်ဘူလ်စောင့်ဆိုင်းနေကြောင်း, Halkalı Gebze 10 Marmaray လိုင်းအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မတ်လစေရန်စီစဉ်ထားသည်။ လိုင်း, ယခင်က 185 76 မိနစ်ကီလိုမီတာ Gebze- Halkalı လမ်းကိုအကြား [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ရထား Line နဲ့တာရှည်
ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယနေ့မြေအောက်မှအမြန်ဆုံးနှင့်အများဆုံးလက်တွေ့ကျတဲ့ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါယာဉ်အသွားအလာချိတ်ဆက်ခြင်းနှစ်ခုအချက်များအကြားမြန်ဆန်တိများနှင့်အဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးပါသည်။ ခေတ်သစ်မြို့ကြီးများအတွက်အနေအထားက Metro မရှိမဖြစ်။ လာမည့်နှစ်များတွင်ဖွံ့ဖြိုးပြီးကမ္ဘာမှာအတွက်နိုင်ငံအများအပြား [ပို ... ]
TCDD မီးရထားမြေပုံ: တည်ဆဲလိုင်းများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး TCDD အဆက်မပြတ်အသစ်နှစ်မျိုးစလုံးလိုင်းကဆက်ပြောသည်များအတွက်တိုးတက်မှုအတွက်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တစ်ဦးထက်ပိုသည်လက်ရှိတည်ဆဲအသစ်နှင့်ပိုမြန်သည့်စနစ်နှင့်အတူအဟောင်းရထားလမ်းနည်းပညာသက်တမ်းတိုးဖို့ [ပို ... ]
လက်ရှိ TCDD မီးရထားမြေပုံ
လက်ရှိမီးရထား TCDD မြေပုံ: မီးရထား TCDD မြေပုံလက်ရှိအချိန်တွင်အလွန်မြင့်မား resolution ကိုအနည်းဆုံးသငျသညျကမ်းလှမ်းလျက်ရှိသည်။ သင်တို့သည်လည်းထို site ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိကမ္ဘာကြီးရထားလမ်းမြေပုံဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ TCDD မီးရထားမြေပုံ: TCDD အောက်ပါလင့်ခ်ကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်ပေးနိုင်အရာရှိတဦးကမြေပုံ railways: [ပို ... ]
မြန်နှုန်းရထားကိုအလွန်ခရီးသည်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုအချင်းချင်းအချင်းချင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထံမှကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများရှိကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာလွယ်ကူချောမွေ့အတူတကွချည်နှောင်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ကားများအမျိုးမျိုးနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများအတွက်ခရီးသွားလာမြန်နှုန်းမြင့်ရထား်ထမ်းဆောင်ယဇ်ကြီးကိုပူဇော် [ပို ... ]
İzmirinဓါတ်ရထားမြေပုံ: Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, 22 ကီလိုမီတာလမ်းရထားလိုင်းကိုများအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတင်ဒါဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ နု၏အကြီးမားဆုံးအင်္ဂါရပ်, ကားဆောက်လုပ်ရေးဝယ်ယူမှုများနှင့်ဖုံးလွှမ်းခဲ့သည်။ တင်ဒါ ... ကြောင့်တူရကီစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုကြသောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် Dogus, Alarko အပါအဝင် [ပို ... ]
﻿ Ayrıca Karşıyaka Tramvay Haritası için aşağıdaki haritaya tıklayınız. Benzer Demiryolu Haberleri ve İlginizi Çekebilecek Diğer Haberlerİzmir Büyükşehir Belediyesi Tramvay Hatları Projesi Karşıyaka Tramvay Hattının Altyapı İhalesinde Yeni Gelişmeler Kaydedildi 11/04/2012 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်ရထားစနစ်၏အိမ်သာစခန်းများမြေပုံ: အစ္စတန်ဘူလ်ရထားစနစ်များအိမ်သာစခန်းများမြေပုံရထားစနစ်များအိမ်သာစခန်းများမြေပုံပေါ်တွင်ပိုကြီးတဲ့ version ကိုကလစ်နှိပ်ပါများအတွက်မြေပုံအစ္စတန်ဘူလ်အပေါ်ပြသအားလုံးအသေးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မြေပုံများ, သတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်မူရင်းများမှာ [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်ဓါတ်ရထားလိုင်းများမြေပုံ: အစ္စတန်ဘူလ်ဓါတ်ရထားလိုင်းများကိုမြေပုံပေါ်မှာရှိသမျှအသေးစိတ်ပြသသည်, ပိုကြီးတဲ့ဗားရှင်းမြေပုံပေါ်တွင်အစ္စတန်ဘူလ်ဓါတ်ရထားလိုင်းများမြေပုံ 's ကိုနှိပ်ပါ။ Maps ကိုသတင်းအချက်အလက်များအတွက်, သူတို့ရဲ့မူရင်းအခြေအနေမှသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမခေါ်ကျေးဇူးပြုပြီးနေကြသည်။ [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်ရထားစနစ်၏ Access ကိုမြေပုံ
အစ္စတန်ဘူလ်မီးရထားစနစ် Access ကိုမြေပုံ: အစ္စတန်ဘူလ်ရထားစနစ်များပိုကြီးတဲ့ဗားရှင်းမြေပုံပေါ်တွင်အစ္စတန်ဘူလ်ရထားစနစ်များ Access ကိုမြေပုံ 's ကိုနှိပ်ပါ, မြေပုံ Access ကိုပေါ်မှာရှိသမျှအသေးစိတ်ပြသလျက်ရှိသည်။ Maps ကိုသူတို့ရဲ့မူရင်းအခြေအနေမှ, သတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖြစ်ကြောင်း [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ရထားကွန်ယက်မြေပုံ: အစ္စတန်ဘူလ်ရထားကွန်ယက်မြေပုံပိုကြီးတဲ့ဗားရှင်းမြေပုံပေါ်တွင်အစ္စတန်ဘူလ်ရထားကွန်ယက်မြေပုံ 's ကိုနှိပ်ပါ, ရှိသမျှအသေးစိတ်အပေါ်ပြသလျက်ရှိသည်။ Maps ကိုသူတို့ရဲ့မူရင်းအခြေအနေမှ, သတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖြစ်ကြောင်း [ပို ... ]
လွန်း TCDD မြေပုံ: မီးရထား၏ပျမ်းမျှအားဝေစု, မီးရထားလိုင်းများခရီးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဈေးကွက်တစ်လျှောက်လုံးအကြောင်းကို 2% ဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုသော yl တူရကီ 45 တက်ကြွနေကြသည်။ အဆိုပါရထားလမ်းခရီးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဈေးကွက်ထဲကနေယူအချို့သောအလတ်စားနှင့်အရှည်လျားပုဒ်စဉ်းစား [ပို ... ]
ဒါဟာ 2019 အစ္စတန်ဘူလ်၌အသစ်သောမြေအောက်ရထားစီမံကိန်းများထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်နှစ်တိုင်အောင်ကျင်းပလိမ့်မည်
ဒါဟာ 2019 အစ္စတန်ဘူလ်၌အသစ်သောမြေအောက်ရထားစီမံကိန်းများထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်နှစ်တိုင်အောင်ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ Kadir လက်ရှိတွင်ဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်သောလာမည့်နှစ်တွင်အသစ်တစ်ခုမက်ထရိုနှင့်5built-in ခံရဖို့ထင်သည့် Metro ဖွင့်ပွဲအတွက် Esenyurt မြို့တော်ဝန်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်၏ဘတ်စ်ကားဘူတာ [ပို ... ]
ဥရောပဘက်ခြမ်းမှာအရေးအပါဆုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်၏တဦးတည်းအကောင်အထည်ဖော်သော Otogar-Bağcılar-Başakşehir-Olimpiyatköyမီထရိုလိုင်းမြေပုံ, Otogar-Bağcılar-Başakşehirလိုင်း Esenyurt-Kirazli လိုင်းဝန်ဆောင်မှုအတွက်ဖွင့်လှစ်။ Başakşehirမြို့တော်ဝန်Mevlüt Uysal, ထိုမက်ထရိုလိုင်းဥရောပဘက်ခြမ်းbaşakşehir-line ကို Kirazli အများစုသက်သာရာပါလိမ့်မယ် [ပို ... ]
Konya မီးရထား Maps ကို
အဆိုပါတူရကီပြည်နယ်မီးရထား TCDD သမ္မတနိုင်ငံ, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးတူရကီသမ္မတနိုင်ငံအတွက်မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထိန်းညှိ operating နှင့်အစိုးရထိန်းချုပ်ထားသည်။ အောက်ပါလင့်ခ်ကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်ပေးနိုင် TCDD ရထားလမ်း၏တရားဝင်မြေပုံ၏ TCDD မီးရထားရထားလမ်းမြေပုံရည်ညွှန်းဖို့ Konya မြေပုံ: [ပို ... ]